Warshadaha Shiinaha iyo Shirkadaha Soosaarka Shiinaha Grand Luminous
Astaamaha buluuga ah ee 'Photoluminescent cobblestone' (dhalaalaya, qaab diiri dhala leh) Astaamaha: Iftiiminta mugdiga & is-iftiiminta mugdiga madow Midabbo kala duwan oo dhalaalaya: midab huruud ah, cagaar, buluug iyo buluug iwm buluug, casaan iwm Waqti dheer iftiin dheer kadib: in ka badan 8 saac Hadiyado dhiirrigelin Koobid: Kaar madaxeed oo kala duwan ama boorso FOY ama gaar loo yaqaan 'Non-sun, aan dhib lahayn, shucaac-bilaash ah. Iyada oo la adeegsanayo European EN71 & REACH shahaadada ogolaanshaha Inta badan dhibco lagu iibiyo: yaabka ...
Qalabka dhagaxa buluugga ah ee loo yaqaan 'Photoluminescent cobblestone' (qaab dhalaalaya, qaab diir dhala leh leh)
Ku soo ifbaxa mugdiga & is-iftiinka mugdiga
Midabbo kala duwan oo dhalaalaya: midab hurdi-cagaaran, buluug-cagaaran iyo cir-buluug ah iwm.
Maalintii layaabka lahayd ee midab cad, jaale, cagaar, buluug, casaan iwm.
Waqti dheer kadib iftiinka dheer: in ka badan 8 saac
Kusoo dirida hadiyad Xirmada: Kaar madaxeed oo kala duwan ama boorsada FOY ama la xayeysiiyay
Wax aan sun ahayn, aan dhib lahayn, shucaac-la’aan.
Iyada oo la raacayo ansixinta shahaadada Yurub EN71 & REACH
Badi iibka dhibco: qaab cajiib ah, midab dhalaalaya iyo midab maalin
Sifeynta ugu weyn ：
magac buuxa Iftiimin dhalaalaysa oo ku saleysan gubboolka madow
Codsi Qurxinta Gaandi, qurxinta dariiqa, qurxinta dukaan dharka lagu qurxiyoRockery, ubaxa ubaxa, muuqaalka dusha sare leh, Aquarium, fishbowl, qurxinta weelka kalluunkaPool dabaqa, qurxinta darbiga, qurxinta saqafka iwm.
Cabbirka caanka ah Cobblestone based glazestone waxay le'egtahay qaab aan caadi ahayn, laakiin dhammaantood waxay kujiraan qaab diirran, culeyskiisu waa 5g / pebble to 10g / pebble, qiyaastii 100 ilaa 200bebbles Kilo kasta
Maalintii midab maalinta cagaar khafiif ah, casaan, jaalle, buluug iwm. (cad oo dabiici ah ayaa ilayska ugu fiican leh)
Midab dhalaalaya oo la heli karo jaale-cagaar, cagaar cagaaran, buluug-buluug ah
Tijaabada iftiinka DIN67510 Qaybta koowaad
Waqtiga tijaabada bilowga 5daqiiqo 10 daqiiqo 60daqiiqo
iftiin mcd / m3 2500 280 120 12
Waqtiga kadib In ka badan 1000min
Xidhmada: 15kg-30kg / kartoon
Qiimaha EXW (USD)
buluug-cagaaran iyo buluug-buluug ah iwm. Maalin qaali ah maalin midab cad ah
Shayga No:: Dhalo dhalaalaya Iftiimin mugdi & is-iftiin leh oo ku jira mugdi Madoobayn Midabbada dhalaalaya: cagaar-cagaaran
Ku soo iftiimaya goos-gooskii mugdiga ahaa (Waa laqeexiyay, Jacayl Buuxda P ...